​तीन शीर्ष नेता : को कति पानीमा ?
Monday,4Dec, 2017 10:07 PM
आगामी मंसिर २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२८ सिटमध्ये प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुको ढुकचुक छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं यस पटकको निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउला कि नआउला भन्ने चिन्तामा देखिन्छन् । कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले देशैभरिको सभामा पुग्नुपरेकोले आफ्नो जिल्लामा त्यति ध्यान केन्द्रित गर्न पाएका छैनन् । कांग्रेसका कार्यकर्ता र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको रिपोर्ट हेर्दै देउवाले जीत हारको गणना गरिरहेका छन् ।
डडेल्धुराबाट गत संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका देउवा गत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले ल्याएको मत परिणामबाट त्यति सन्तुष्ट छैनन् भन्ने कुरा कांग्रेसनिकट कार्यकर्ता बताउँछन् । विगतमा एमाले–माओवादी प्रतिद्वन्द्वीको फाइदा उठाउँदै आएका देउवा यस पटक एमाले–माओवादी मिलेपछि साँच्चै नै संकटमा छन् । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १९ हजार ५२३ मत ल्याएको थियो भने एमालेले १६ हजार ९१५ र माओवादीले १० हजार ९४५ ल्याएको थियो । वाम गठबन्धनले ल्याएको यो मतलाई जोड्दा डडेल्धुरामा कांग्रेस र राप्रपा मिल्दा पनि १९ हजार ७९१ मत पुग्छ भने वाम गठबन्धनको २७ हजार ६८० पुग्छ ।
२०६४ सालको संविधानसभामा देउवाले २० हजार ५२९ मत ल्याएका थिए भने उनको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी माओवादीका खगराजले १९ हजार १६१ र एमालेका विक्रमबहादुर शाहीले ७ हजार ९८२ मतल्याएका थिए । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्थानीय कांग्रेसबीच विवाद रहेकोले पनि कांग्रेसको भोट कम आएको वार एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णु भट्ट बताउँछन् । जिल्ला कांग्रेसका विवाद साम्य पार्न देउवा सफल भए पनि वाम गठबन्धनले आफ्नो भोट जोगाउन सके यस पटक देउवाले निर्वाचन हार्ने स्थानीय पत्रकार तथा मानवअधिकारवादी छत्र साउद बताउँछन् । त्यसैले वाम गठबन्धनको ‘भोट’ फोड्न देउवा स्वयं क्रियाशील छन् । काठ व्यापारीलाई देउवाले कांग्रेस प्रवेश गराउन सफल भएका छन् । त्यसैगरी गन्यायधुरा १ देउवाको पकड भएको वडा हो । त्यस वडामा कांग्रेस स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पूरै रित्तिएको थियो । देउवाको पकड भएको गन्याधुरा–१ बाट माओवादीका वडाअध्यक्ष चेतराम भट्टसहित ४ जना सदस्यले जितेका थिए । गत साता गन्याधुरा–१ का वडाअध्यक्षसहित चारै जना सदस्यले माओवादी छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेका छन् । डडेल्धुरामा यसैगरी वाम गठबन्धनको ‘भोट’ बिथोलिन थाल्यो भने देउवाको स्थिति मजबुत हुने देखिन्छ । तर, वाम गठबन्धनका उम्मेदवा खगराज भट्ट आफू चुनाव जित्ने कुरामा ढुक्क छन् । भट्ट भन्छन्– माओवादीका केही कार्यकर्ता कांग्रेस प्रवेश गरे पनि त्यसको प्रभाव स्थानीय मतदातामा छैन ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार छन् । ओलीका विरुद्ध नेपाली कांग्रेसले प्राध्यापक खगेन्द्र अधिकारीलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । स्थानीय निकायमा झापा क्षेत्र नं. ५ बाट एमालेले २९ हजार ४६०, माओवादीले १२ हजार ६८३ गरेर ४२ हजार १४३ मत ल्याएका थिए भने कांग्रेसले २३ हजार २५०, राप्रपाले १० हजार २२५ मत ल्याएका थिए । झापा–५ मा लोकतान्त्रिक गठबन्धनभन्दा वाम गठबन्धनको मत ३० हजार २४६ ले अगाडि छ । वाम गठबन्धनबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीलाई प्रस्तुत गरिएको र भारतीय नाकाबन्दीमा राष्ट्रियताप्रति अडान लिएको कारण सर्वसाधारण उद्योगी, बुद्धिजीवीको मत पनि ओलीलाई आउने दाबी ओलीका प्रेस संयोजक चेतन अधिकारी बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूलाई चितवन क्षेत्र नं. ३ मा केन्द्रित गरेका छन् । छोरा प्रकाश दाहालको असामयिक निधनले मर्माहत भएका प्रचण्डले अब आफूले चितवन–३ नछोड्ने र यहाँको समग्र विकासमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । माओवादी जनयुद्धमा चितवनको माडीमा यात्रुवाहक बसमाथि बम विस्फोट गराएर निहत्था जनताको हत्या गरेको आरोप खेपेका प्रचण्डले त्यो घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै क्षमायाचना गरेका छन् । छोरा प्रकाशको निधनले स्थानीय जनताले उनीप्रति सहानुभूति राखेका छन् । छोरी रेणु दाहाल भरतपुर उपमहानगरपालिकाको मेयरमा विजय भएकोले दाहालको जित सुनिश्चित भए पनि देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरु उनलाई हराउन सक्रिय हुने भएकोले यस पटक जसरी भए पनि चुनाव जित्ने रणनीतिअन्तर्गत उनले जिल्ला नछाडेको सुरेशचन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
चितवन क्षेत्र नं. ३ मा ७८ हजार ३२१ मतदाता छन् । गत स्थानीय निकायको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट एमालेले २४ हजार ९९४, माओवादीले १८ हजार १०४, कांग्रेसले २६ हजार ९२३ र राप्रपाले ८ हजार ३४२ मत ल्याएको थियो । यो तथ्यांकलाई हेर्दा वाम गठबन्धनको मत ७ हजार ३३३ ले बढी छ । यस क्षेत्रबाट लोकतान्त्रिक गठबन्धनले विक्रम पाण्डेलाई उठाएको छ । पाण्डे दोस्रो संविधानसभामा राप्रपाबाट विजयी भएका थिए ।